चीन ट्याटू समायोज्य उचाई कालो हात आराम स्टैंड निर्माण र कारखाना | MOLONG
ट्याटु समायोज्य उचाई कालो हात आराम स्टैंड
उच्च गुणस्तर छाला हात आराम।
Different फरक बिन्दुबाट समायोज्य।
बोक्न सजिलो - पोर्टेबल
सूट केसमा फिट!
उचित मूल्य - प्रतिस्पर्धी
टिकाऊ र स्थायी र स्थिर
ट्याटू स्टुडियोको लागि आदर्श विकल्प
यो पोर्टेबल समायोज्य पेशेवर टैटू कुर्सी कुनै पनि अंश हटाए बिना समायोजित गर्न सकिन्छ।
छाती प्याड दुबै पुरुष र महिलाहरूको लागि ठूलो आरामको लागि पूर्ण रूपले पोष्ट गरिएको छ।
सीट, आर्मरेस्ट, छाती प्याड र हेडरेस्ट पूर्ण रूपमा समायोज्य छन्।
आइटम प्रकार: टैटू आर्मरेस्ट
सामग्री: धातु + अशुद्ध छाला
वस्तुको रंग: कालो
कालो प्याड आकार: लगभग। २२ x १ cm सेमी / 7. x x 7.7 इन्च
समायोज्य उचाई: लगभग। -1 83-१-136 सेमी / .5१.-5--5२..8 इन्च
पेशेवर ट्याटू सामान आर्मेरेस्ट
तपाईं उचाई समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न फरक स्थितिमा आर्मरस्ट समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
एर्गोनोमिक डिजाइनले कुनै पनि ट्याटू काम सुइट गर्न कुनै कोणमा समायोजन गर्न अनुमति दिँदछ।
बटन थिच्नुहोस् र यसलाई पछाडि झुकाउनुहोस् र तपाईंको इच्छित कोणमा। यदि पाइभट वा कोण हो भने मात्र अगाडि वा पछाडि झुकाव हुन्छ
यो आर्मरेस्ट यात्रा गर्नका लागि र ट्याटु कार्यक्रमहरूको लागि बोक्न सजिलो छ।
3 टुक्राहरूमा भाँच्दछ र वास्तवमा हल्का तौल र सानो थोक
यो आर्मरेस्ट पनि टिकाऊ र सफा गर्न सजिलो छ।
पूर्ण रूपमा समायोज्य र भारी शुल्क
- हतियार, खुट्टा वा खुट्टा आरामको लागि नरम र आरामदायक प्याड।
- एर्गोनोमिक डिजाइनले कुनै पनि ट्याटू काम सुइट गर्न तपाईंलाई कुनै पनि कोणमा (१ more० डिग्री भन्दा बढि) समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ।
- विभिन्न आवश्यकताको लागि समायोज्य उचाई।
- हतियार, खुट्टा वा खुट्टा आरामको लागि नरम र आरामदायक प्याड, ग्राहकको सुविधा बढाउँदै।
- ट्राइपोड स्ट्यान्डले अधिक स्थिर र गैर पर्ची (रबरको छोराहरू सहित धातु खुट्टाहरू) आपूर्ति गर्दछ।
- पोर्टेबल र फोल्ड गर्न योग्य, भण्डारण वा बोक्नका लागि सजिलो।
【व्यावसायिक। प्रोफेशनल ट्याटु आर्म आराम र खुट्टा आराम कुशन, नरम र बाक्लो प्याडले तपाईंलाई हतियार, खुट्टा र खुट्टा आरामको लागि आराम दिन्छ, तपाईंको ट्याटू कामलाई अधिक सुविधाजनक बनाउँछ।
Ight उचाई समायोज्य】 उचाइ cm 65 सेमीबाट १२cm सेमीमा समायोजन गर्न सकिन्छ तपाईंको फरक आवश्यकताहरू पूरा गर्न, तपाईंलाई र तपाईंको ग्राहकहरूलाई उत्तम अनुभव दिन्छ। बलियो असर क्षमता, आर्मरेस्ट स्ट्यान्डले विभिन्न तौलका व्यक्तिहरूको लागि पर्याप्त समर्थन प्रदान गर्न सक्छ
【डिटेकेबल】 यो ट्याटू आर्म रेस्ट डिटेकेबल छ, भण्डारण गर्न र बोक्न सजिलो छ, तपाईंलाई अधिक भण्डारण ठाउँ बचत गर्दछ जब तपाईंलाई तिपाई स्ट्यान्डको आवश्यकता पर्दैन। प्याडले कुनै पनि टाटु कार्यको लागि १ 180० डिग्री ए angle्गल भन्दा बढी समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ।
【एन्टी स्किड】 रबरको छोराहरूसहित ट्राइपड धातु खुट्टाहरूले ट्याटुattoo्को लागि स्थिरता प्रदान गर्दछ, भुइँमा नचढाउने एन्टि-स्किड, धेरै व्यावहारिक र टिकाऊ। पेशेवर ट्याटु सैलून वा व्यक्तिगत ट्याटू कलाकारको लागि आदर्श उत्पादन।
【एक-मा-एक सेवा you यदि तपाईं हाम्रो आईटमहरूको बारेमा केहि प्रश्न छ, कृपया हामीलाई ईमेल द्वारा सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न खुशी छौं। असाधारण ग्राहक सेवा हामीले गर्ने कुरा मात्र हो!
अघिल्लो: किंगकोong T ट्याटू कार्ट्रिज मेशिन
अर्को: डिस्पोजेबल सिलिकॉन समायोज्य टैटू कार्ट्रिज पकड (२ppcs / बक्स)
समायोज्य उचाई स्टेनलेस स्टील टैटू आर्म रे ...